Musharax Axmed Macallin Fiqi oo lagu soo dhaweeyay Cadaado – Radio Muqdisho
Musharax Axmed Macallin Fiqi oo lagu soo dhaweeyay Cadaado
Munaasabad lagu soo dhaweeynayay musharaxa Axmed Macalin Fiqi ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado.
Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka gobollada dhexe ayaa gaaray magaalada Cadaado, halkaaso si diirran loogu soo dhaweeyay.
Odayaasha dhaqanka iyo xubno ka tirsan bulshada Cadaado ayaa ka qeyb qaatay soo dhaweynta musharaxa Axmed Macalin Fiqi, waxeyna u rajeeyeen in uu xilkaasi ku guuleeysto.
Murashaxa Axmed Macalin Fiqi ayaa ka mahadceliyay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado, isagoo tilmaamay in magaalada Cadaado ay noqotay xudunta Dimuquraadiyadda gobollada dhexe, maaddaama lagu qabanayo shirka maamul u sameeynta gobollada dhexe.
Dood cilmiyeed looga hadlayay adeegsiga argagixisada ee baraha xiriirka bulshada oo lagu qabtay Muqdisho